> Resource > Android > Sida loo Play files MP4 on Android Phones
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad ku guul darreysato inay ku ciyaaraan files MP4 aad telefoonada Android. Sababtu waxa weeye in aad codec MP4 aan ay taageerayaan telefoonka aad Android. Hadda waxaad isticmaali kartaa awood badan video Converter talinayaa hoos ku qoran. Waxay bixisaa goobaha default ee dhamaan telefoonada Android. Sidoo kale oo aad taaban karo ilaa aad MP4 video dhakhso leh shaqada ay tafatirka.
Beddelaan MP4 in Android Qaabka socon for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• U beddelaan si ay u hindisooyin badan, sida telefoonada Android, iPhone, iPad, qalabka Game, iwm
• Taageerida wax video ama files audio diinta.
• goo, dalagga, darto saamaynta, Cinwaan, iwm in la shakhsiyeeyo aad video.
• No tayada khasaaraha ee files warbaahinta wax soo saarka.
• xawaaraha si dhakhso ah aan la aamini karin in ay soo qulquli habka shaqada aad.
Beddelaan inay Android Phones
Just Korka video Converter this ee telefoonada Android, si aad si fudud u ciyaari karo video meel kasta iyo waqti kasta.
Taageer Conversion kasta Qaabka
Waxaad u bedeli karaan video ama maqal ah ee qaab kasta oo loo eegin size faylka.
Just ciyaari talanti si aad u shakhsiyeeyo aad video ama maqal ah, oo waxaad ka samaysaa masterpiece weyn.
​​Waxaad u bedeli karaan file weyn sida filim ama show TV xawaare ultrafast ah a.
Sida loo Beddelaan MP4 in Android
Tallaabo 1: Ku dar files MP4 this MP4 video Converter u Android.
Guji "Add Files" icon inay ku shuban aad MP4 video. Ama si fudud u jiidi aad MP4 video xagga daaqaddii barnaamijka. Marka aad ku darto files MP4 ah, waxay muujiyeen doonaa sida thumbnails in saxaarad shayga. Waxaad hagaajin kartaa amarka, la badalo magaca faylka, dooran audio ama Cinwaan haddii loo baahdo.
2. Dooro qalab Android sida wax soo saarka
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad. In category Device ah, aad arki doonaa telefoonada brand kala duwan. Halkan, waxaad ka heli kartaa ku dhowaad dhammaan daydo phone Android. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah sida ay telefoonka aad Android. Qaab saarka ayaa si buuxda u la jaan qaada qalabka Android.
3. badalo MP4 in telefoonada Android
Hit Beddelaan button, ka dibna video Converter samayn doonaa MP4 si ay Android haya'ad goobtii. Waxaa aad u hufan ee diinta iyo bar horumarka waqtiga inta hadhay ku tusi doonaa.
Haddaba sidaas daraaddeed dhan files MP4 la ciyaari kartaa telefoonada Android si habsami leh, boodin! Diinta MP4 in Android ma noqon karaan kuwo sahlan arrintan qalab xariif ah, haatan bilaabaan inay ku ciyaaraan MP4 on telefoonada Android.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan MP4 in Android Phones
Su'aalaha ku saabsan ciyaaro MP4 on Android
Su'aal: Sidee si ay u gudbiyaan MP4 dhexeeya aan computer iyo Android phone
. Waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo saddexaad ah - barnaamijka xisbiga ugu horeysay Kies noqon kartaa doorashada ugu fiican, kaas oo kaa caawinaysaa in aad si fudud u maareeyaan wax walba oo ku saabsan Android ka PC ama Mac.
Su'aal: MP4 waxaa si rasmi ah u aqbalay sida qaab ay taageerayaan aan telefoonka Android. Waa maxay sababta aan weli ma u ciyaari karaa?
MP4 waa weel multimedia la video iyo maqal ah in codec kala duwan. Si kastaba ha ahaatee aad codec MP4 lama jaanqaadi karaan telefoonka. Xaaladdan oo kale, kaliya qaadan Converter video kama dambaysta ah si ay kuu caawiyaan.
Top 5 MKV Free in Converter MP4 for Windows / Mac